नेपालले दियो फेरी भारतलाई अहिलेसम्मकै ठुलो झट्का, भारतभर हंगामा — Imandarmedia.com
१लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णय
नेपालले दियो फेरी भारतलाई अहिलेसम्मकै ठुलो झट्का, भारतभर हंगामा
काठमाडौँ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको विरोधमा बेला-बेलामा निहुँ खोजिरहेको भारतलाई नेपालले फेरी अर्को ठुलो झट्का दिएको छ । भारतले कल्पना नै नगरेको कदम नेपालले चालेपछि अहिले भारतभर हंगामा मच्चीएको छ ।
टीआरपीका लागि नेपालका बारेमा अतिरञ्जित र अनर्गल प्रचार गरिरहेको र पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा चिनिया राजदूतको नाम जोडेर आपत्तिजनक विषयहरु प्रसारण गर्ने भारतीय मिडियाहरुलाई नेपालको कडा उक्त निर्णयले ठुलै झापड लागेको छ ।
नेपाललै विदेशी च्यानल वितरक मल्टि सिस्टम अपरेटर (एमएसओ) हरुले भारतीय न्युज च्यानलहरुको प्रसारण नेपालमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । वितरकहरुले बिहीबार साँझदेखि दूरदर्शनबाहेक सबै भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण रोकेको मेगा म्याक्स टिभीका उपाध्यक्ष ध्रुव शर्माले बताए ।
के भनेका भारतीय मिडियाले ?
भारतीय टीभी च्यानल जी मिडियाले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि काल्पनिक र आपत्तिजनक रिपोर्ट प्रशारण गरेको थियाे । प्रधानमन्त्री ओली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको विषयमा काल्पनिक कथा बुन्दै सो टीभीले कूटनीतिक मर्यादासमेत ख्याल नगरिकन अनर्गल प्रचार गरेको हो ।
‘ओली कि इश्किया’ शीर्षकमा प्रशारित रिपोर्ट १६ मिनेटभन्दा लामो छ । चिनियाँ राजदूत यान्छीलाई ‘विषकन्या’ को संज्ञा दिँदै भारतीय टीभीले उनैको जालमा फसेर ओलीले भारत विरोधी कदम चालिरहेको भनेको छ । आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्दै रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘केपी ओली ने अपने दिलके हसरतोंको उडान देनेका लिए यान्की से नजदिकीया बढायी, लेकिन वा हनी ट्र्याप मे फसगए ।’
राजदूत यान्छीकै आग्रहमा फसेर ओलीले भारतका तीन क्षेत्रहरुमाथि दाबी गर्दै आफ्नो नयाँ नक्शा प्रकाशित गरेको दाबीसमेत गरिएको छ । यसलाई पुष्टि गर्न ओली र यान्छीको फोटो जोडेर केही काल्पनिक संवादहरु पनि सुनाइएको छ । भारतीय टीभीको अफवाह यतिमा मात्रै सीमित छैन ।
भारतीय टीभी च्यानल जी मिडियाले हालै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि काल्पनिक र आपत्तिजनक रिपोर्ट प्रशारण गरेको हाे । प्रधानमन्त्री ओली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सम्वन्धमाथि काल्पनिक कथा बुन्दै सो टीभीले अनर्गल प्रचार गरेको हो ।
‘ओली कि ईश्कीया’ शीर्षकमा प्रशारित रिपोर्ट १६ मिनेटभन्दा लामो छ । चिनिया राजदूत यान्छीलाई ‘विषकन्या’ को संज्ञा दिँदै टिभीले उनैको जालमा फसेर ओलीले भारतविरोधी कदम चालिरहेको दाबी गरेको छ ।
आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्दै रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘केपी ओली ने अपने दिलके हसरतोंको उडान देनेका लिए यान्की से नजदिकीया बढाइ, लेकिन वा हनि ट्र्याप मे फसगए ।’ यान्कीकै आग्रहमा फसेर ओलीले भारतका तीन क्षेत्रहरुमाथि दावी गर्दै आफ्नो नयाँ नक्शा प्रकाशित गरेको दावीसमेत गरिएको छ । यसलाई पुष्टि गर्न ओली र यान्कीको फोटो जोडेर केही काल्पनिक संवादहरु पनि सुनाइएको छ ।
भारतीय टीभीको अफवाह यतिमा मात्रै सीमित छैन । उसले ओलीको ‘निजी एमएमएस’ चीनको हातमा रहेको र त्यसैलाई लिएर ओलीसँग चीनले ब्ल्याकमेलिङ गरिरेहको भन्नसमेत भ्याएको छ । यसको जानकारी नेपालका केही संसदलाई रहेको भन्दै उनीहरुले लोकलाजका कारण मुख खोल्न नसकेको दावी गरिएको छ ।
जीटीभीमा प्रशारित यो रिपोर्ट भारतीय पत्रकारिताको नांगो रुप हो । यो रिपोर्टलाई ‘पितपत्रकारिता’ वा ‘प्रपोगाण्डा’ भनेर दुत्कारेर मात्रै पुग्दैन । यो पत्रकारिताको खोल ओडेर गरिएको संगीन अपराध हो । सत्यतासँग एक प्रतिशत पनि सम्वन्ध नरहेको विषयलाई १६ मिनेटको रिपोर्ट बनाएर प्रशारण गर्ने भारतीय टिभी च्यानललाई के गर्ने ? हामी त इन्डियन च्यानलले जे पनि भन्छन् भनेर मुन्टो बटारौंला, तर यसले भारत र अन्य देशका मानिसहरुलाई पक्कै प्रभाव पार्छ ।
कुनै अमुक देशका प्रधानमन्त्री र महिला राजदूतबीच काल्पनिक कथा रचेर प्रायोजित रिपोर्ट बनाउनु जी टीभीको अक्षम्य अपराध हो । यसमाथि नेपालको सरकारले एक्सन लिनैपर्छ । केही समयअगाडि नेपालमा एक अखबारले माओत्सेतुङको तस्वीरमा मास्क लगाइदिएको सामान्य घटनामा काठमाडौंस्थिति चिनीया दूतावासले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आपत्ति जनाएको थियो । जीटीभीको हर्कत त्योभन्दा सयौं गुणा आपत्तिजनक छ ।
तर, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास भने भारतीय मिडियाले एकपछि अर्को कपोलकल्पित र भ्रामक समाचारहरु प्रकाशन/प्रशारण गरिरहँदा पनि मस्त निद्रामा छ । टाइम्स अफ इन्डियाजस्तो प्रतिष्ठित पत्रिकाले समेत नेपालका प्रधानमन्त्रीको तस्वीर दुरुपयोग गर्यो । त्यसमा आपत्ति जनाएर दूतावासले एउटा पत्रसमेत पठाउन सकेन ।
जिटीभीको रिपोर्टमा पनि उसले अहिवलेसम्म चासो दिएको छैन । विषयको संवेदनशीलताका कारण अब नेपाल सरकारले नै जीटिभीमाथि एक्सन लिनुपर्ने समय आएको छ । टीभीलाई उक्त रिपोर्ट तत्काल हटाएर माफी माग्न लगाउनुपर्छ ।
अर्को कुरा, नेपालको दुष्प्रचार गर्ने भारतीय मिडिया नेपालमा स्वच्छन्द तरिकाले चलिरहेका छन् । नेपालीले पैसा तिरितिरी भारतीय मिडियाका ‘फेक न्यूज’ हेरिरहेका छन् । यस्तै अवस्था हो भने प्रश्न उठ्न सक्छ, यी भारतीय न्यूज मिडियालाई नेपालमा सदाका लागि किन रोक नलगाउने ?
यसैबीच सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार र प्रधानमन्त्रीबारे भारतीय सञ्चार माध्यमले अनर्गल प्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । भारतीय मिडियाको अनर्गल प्रचारले सीमा नाघेको भन्दै उनले ट्विटरमा लेखेका छन, ‘हद भयो, बकवास बन्द गर ।’
नेकपा भित्रको विवाद र नेपाल मामिलाबारे हालै भारतीय सञ्चार माध्यमले सम्प्रेषण गरिरहेका कपोलकल्पित र निकै आपत्तिजनक फेक समाचारप्रति नेता श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका हुन् ।
विगत केही दिनदेखि भारतीय मिडियाले चिनियाँ राजदूतसँग जोडेर प्रधानमन्त्रीबारे काल्पनिक र निकै आपत्तिजनक सामग्री प्रशारण गरिरहेका छन्। यस्तो हदैसम्मको लज्जास्पद यो हर्कतमा उत्रने भारतीय मिडियालाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी चर्को बिरोध सुरु भएको छ
भारतीय मिडियाको विरोध भइरहँदा नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले एक ट्विट गर्दै अनर्गल प्रचारले सीमा नाघेको उल्लेख गरेका छन । ‘भारतीय सञ्चार माध्यमले हाम्रो सरकार र प्रमका बारेमा गरेको अनर्गल प्रचारले सीमा नाघ्यो। हद भयो। बकवास बन्द गर।’ नेता श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको निम्ति हामी एकढिक्का छौं। बिदेशीको फुटाउ र स्वार्थ पुरा गर नीति सफल हुन दिनेछैनौ। यहाँ के गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो।’
चिनीँया राजदूतकाे नेपालमा सक्रियता ?
सत्तारुढ दल नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष चलिरहेको बेला भेटघाट श्रृंखला सुरु गरेकी चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीले बिहीबार पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सँग भेटवार्ता गरेकी छन् । नेकपाको आन्तरिक विवाद मिलाउन सक्रिय रहेको आरोप लागेका बेला उनले प्रचण्डलाई भेटेकी हुन् ।
यसअघि उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा नेताहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई उनले नेकपामा विवाद बढेपछि भेटघाट गरिसकेकी छन् । अध्यक्ष प्रचण्डलाई राजदुत यान्छीले बिहीबार उनकै निवास खुलमटारमा गएर भेटेको खुलासा भएको हो ।
राजदुत होउ र प्रचण्डबीचको भेटबारे दाहालको सचिवालयले पुष्टि नगरे पनि चिनियाँ दुतावासबाट भेटको जानकारी प्राप्त भएको हो । दुतावासका प्रवक्ता चाङ सीले उक्त भेटवार्तामा दुवै पक्षले साझा विषयमा आफ्ना धाराणहरु आदान–प्रदान गरेको बताए । उनले भने, ‘हामी (चीन) नेपाली जनताको चासोलाई ध्यानमा राखेर जहिले पनि नेपालमा राजनीतिकस्थिरता र आर्थिक विकास होस भन्ने चाहन्छौं ।’
नेकपाभित्र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली तथा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल बीच चलिरहेको शक्ति संघर्षका कारण राजदुत होउले राष्ट्रपतिसहित नेकपाकै नेताहरुलाई गरेको भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
चीन मामिला विज्ञ रुपक सापकोटा चिनियाँ राजदुत होउको पछिल्लो गतिविधिलाई चीनले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता चाहेको मान्छन् । ‘चीनलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो छैन । तर, नेपालमा राजनीति स्थिरता होस् भन्ने उसको चाहना हो,’ उनले भने । राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनालले यस अघि नै राजदुत होउका भेटघाटहरुलाई ‘असामान्य अवस्थामा सामान्य भेट’ को रुपमा संज्ञा दिइसकेका छन् ।
राजदुत होउले असार २३ गते पूर्व प्रधानमन्त्री खनालसँग उनकै निवास डल्डुमा पुगेर भेटवार्ता गरेकी थिइन् । यसको दुई दिन आइतबार (असार २१ गते) अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालसँग उनकै निवास कोटेश्वरमा भेटवार्ता गरेकी थिइन् । यी दुई नेतासँग भेटवार्ता गर्नु अघि उनले असार १९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् ।
‘एमाले विभाजन भए आगामी निर्वाचनमा दुवै पक्षको सर्मनाक पराजय हुन्छ’